दुर्गालाल केसी का लेखहरु
दुर्गालाल केसी, मंसिर २४, २०७४
दाङ–२ मा माओवादी केन्द्रका महरा विजयी
दुर्गालाल केसी, मंसिर २३, २०७४
दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा १४ हजार १ सय ४५ मतान्तरले विजयी भएका छन् ।
दाङ-२ प्रदेशसभा ख मा एमालेका अमर डाँगी विजयी
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत प्रदेशसभा ख बाट एमाले उम्मेदवार अमरबहादुर डाँगी विजयी भएका छन् । उनले २१ हजार ४ सय ५० मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार भरतबहादुर न्यौपानेले १३ हजार १ सय ९० मत ल्याएका छन् । ५७ हजार १ सय ७० मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा ३८ हजार २ सय २५ मत खसेको थियो ।
दाङमा शंकर पोख्रेल विजयी
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत प्रदेश सभा ‘क’बाट एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोख्रेल विजयी भएका छन् । उनले २० हजार ७ सय २३ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार कमलकिशोर घिमिरेले ११ हजार १ सय ७२ मत ल्याएका छन् । ५१ हजार ७ सय मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा ३६ हजार ९ सय ३८ मत खसेको थियो ।